ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကြံရာပါ နှင့် ရှေ့ခရီးစဉ်”
ဘန်ကီမွန် အပါအဝင် သံတမန်တော်တော်များမျာက ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ဖို့ကို အလေးပေးပြီးမဆွေးနွေးဘူး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်ရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတရားမျတရေးကိုပဲပြောတယ် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာက နအဖက သဘောတူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး တူတယ်ထားဦးတော့ ဆန္ဒ ခံယူပွဲပြန်လုပ်ရမယ်ထင်တယ် ဖြစ်နိုင်ခြေ အရမ်းနည်းတယ် ပူးသတ်မယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုလဲ သူတို့ယုံကြည်ရာလုပ်တယ်လို့နားလည်ပေးသင့်တယ် ပုတ်ခတ်တာကလွယ်ပါတယ် စည်းရုံးတာကခက်တာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နအဖကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲ ကိုပေါပြောသလိုတိုက်တာကတော့ တိုက်ရမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ဆက်တိုက် တဲ့အခါ ပူးသတ်မဲ့လူတွေကို စည်းရုံးထားနိုင်ရင် အနည်းဆုံး ကိုဘက်က အတွင်းလူရတာပေါ့ အလိုမမဟုတ်ရင် အပြန်အလှန်ဆဲနေတာကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး
ထောက်ခံပါ၏။ ဂုဏ်ယူစွာ၊လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ကိုပေါ ခင်ဗျား။
အကြီးကြီးများရော ၊ စက များရော ကြားသိ ဖတ်တတ်ကြပါစေ။
ကိုပေါ အနေနဲ့ စစ်အဆိုးရကို အပြစ်တင်တာကို ခဏလောက်လျှော့ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် အတိုက်အခံတွေကို နဲနဲ ဝေဖန်ထောက်ပြပါအုန်း။ တကယ်တော့ တာဝန်ရှိတဲ့ အထဲမှာ အတိုက်အခံတွေလည်းပါတယ်။
တချို့ကတော့ "ပူးသတ် " ရုံဒင် မက "ပလူးသတ်".."ဖားသတ်"..."ဝေစားမျှစားသတ်"..." အ
ရိုးအရင်းကိုက်သတ် "..." ဂဠုန်ဆားချက်သတ်"...စသဖြင့်သန်ရာ သန်ရာ တိုက်ပွဲဝင် နည်းသစ်များ ထွင်နေကြကြောင်းပါ ဖရာ့ :D
(၂) ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရေး
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကိုသေချာနားမလည်လို့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုရှင်းလင်းပေးပါလားခင်ဗျား၊
I didn't understand well about political. But I used to come and read your post every update. I think most of people same age to me also they wont' understand well.
အာဏာ ဘယ်တော့လွဲမယ်ဆိုတာမပြောပါဘူး.. ဆိုလိုတာက ၂၁၀၁မှာ ဘယ်သူနိုင်နိုင် အာဏာရူးအဖွဲ့ ကတော့ ကန်ချတောင် ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူး.. နောက်ထပ် ၁၉ ကြာရင် အခုလို နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု ထပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်ဦးမယ်...
ဟို Reader 88
ကို ညဏ်မမှီတိုင်း သူများကို အဲ့ဒီလိုမပြောရဘူး။ မင်းက အခုမှ ကလေးပဲရှိသေးတာပဲ။ ဒီလို ခက်ခဲ ရူပ်ထွေးတဲ့ အရာကို ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ။ မင်းမပြောနဲ့ မင်းအဖေတောင် နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဆိုဒ်ကို ဖတ်နေတဲ့လူတွေဟာ မင်းထက်အသက်ကြိးသူတွေပိုများတယ်။
သို့ ဆရာကြီး (ခေတ္တ ကျွန်းပေါ် )
ခင်ဗျားသာ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလိုဝေဖန်လိမ့်မည်လို့မထင်ပါ
အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာစာတမ်းကိုအကြွင်းမဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခု ကိုပေါနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲနေတယ်။
ဝင်အရွေးခံဖို့လုပ်နေသူတိုင်းဟာ နအဖရဲ့ကြံရာပါမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည့်ပုံအခြေခံဥပဒေ ဆနဿဒခံယူပွဲအတွေ့အကြုံအရ ၂၀၁ဝရွေးကောက်ပွဲဟာလဲဘယ်လိုမှ တရားမဿျှတ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ နားလည်တယ်။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့် ၁၉၉၀ တုံးကလိုပဲ တကယ်မှန်ကန်စွာ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာအုံးမယ်ဆိုအုံးတော့. ရွေးကောက်ပွဲနောက်တက်လာမယ့် အစိုးရနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်မိုးထားမယ် စစ်တပ်ကြီးစိုးရေး အခြေခံဥပဒေကြောင့် ကျုပ်တို့မျှောလင့်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ စံနှုံးမှီတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာလဲ နားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့်.. ဒါပေမယ့် ပြသနာက အဲဒီ ဒါပေမယ့်ပဲ။
ကျုပ်တို့ ဘယ်လိုပင်ဆန့်ကျင်ပါစေ နအဖကလဲ သူ့ဇတ်သူမရ ရအောင်ကမှာဖြစ်တယ်။ ကျုပ်တို့က အဲဒါကိုအလုံးစုံရပ်သွားအောင်တားနိုင်သလား။ တတ်နိုင်ရင် ၂၀၁ဝလုံးဝပျက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဖက်က အဲလောက် အင်အားမရှိရင်ရော? မရှိရင် ကိုယ့်ဖက်က လူများလုံးဝမပါပဲ နအဖ သူ့လူကြမ်များ သူ့ဇတ်ပို့များ သူ့ဇတ်လိုက်များနဲ့ သူဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ ဇတ်ကားကြီးသူတို့ဖာသာ သူတို့ကသွားကြရင်။ ကျုပ်တို့တွေတကယ့်ဇာတ်လမ်းကြီးမှာ ကိုယ့်လူတစ်ယောက်မှမပါတဲ့ ကိုယ့်ဖက်က လူကြမ်းတစ်ဦးမှမပါတဲ့ ပဒေသာပြဇတ်ကြီး သူ့ဖာသာကသွားလိမ့်မယ်။ ကျုပ်အမြင်အရ ၂၀၁၀ လုံးဝပျက်ရေးက Plan A ဆိုလျှင်.. အခြား Backup plan များ ဥပမာ မိမိ proxy အဖွဲ့အစည်းများစိမ့်ဝင်ဖောက်သွင်းရေး ။NLD အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝင်စရာမလို မဟာမိတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် မူရင်းမူဝါဒတူညီပြီး မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လှုပ်ရှားလိုသူများ စသည်တို့ကို အသုံးချဖို့ စဉ်းစားရမယ်။ တိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့လဲ အမာခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကလဲ ရပ်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်တည်နေတဲ့ အချိန်တပြိုင်နက်တည်းမှာ မိမိတိုင်းရင်းသားအကျိုးကိုတကယ်လုပ်ဆောင်မယ့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ မွေးထားကာ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားရမယ်။ ထိုကဲ့သို့ backup plan များ လုံးလုံးမရှိပါပဲ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက် လုံးဝအပြုတ်တိုက်ရေးမှာမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မှ ထိုကဲ့သို့ မိမိဖက်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးမည့်သူများကို အင်နှင့်အားနှင့် ဆန့်ကျင်မိလျှင် တကယ့်တကယ် ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကျလျှင် ထိုသူများ အလွန်အားနည်းသွားပေလိမ့်မည်။ လက်ရှိ မှာ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေသူများထဲမှာ နအဖအလိုတှောရိများပါနေသလို မိမိဖက်မှ အသုံးဝင်မည့် proxy များလဲပါဝင်နေနိုင်ကြောင်း သတိပြုမိစေလိုသည်။ ဒီကိစဿစဟာ အတှော delicate ဖြစ်ပါသဖြင့် အလောသုံးဆယ် သုံးသပ်ပြီးလွယ်လွယ်နှင့် အားလုံးကို သိမ်းကြုံးဆန့်ကျင်ရန် အချိန်စောနေသေးကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ အတတ်နိင်ဆုံး Strategically ကျကျ သုံးသပ်ပြီး မြိုသိပ်သင့်တဲ့အချိန်မြိုသိပ်အောင့်အီးပြီး ကိုယ့်ဖက်က လိုက်အပ်သည်များကို လက်တွေ့ကျကျပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ မကြိုက်တာ မထောက်ခံတာတခုတည်းနှင့် လက်တွေ့ကျကျ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်ပါ။
I agreed with Ko Kyaw Htin.
တက်ဂ်ထားတယ်ဗျို့။ မြန်မြန်ရေးဗျာ။ :P
Thar Soe said...
ရေးလေ့ရေးထတော့မရှိဘူး အသည်းယားပြီးလက်ယားလာတာမအောင့်နိုင်လို့ ၀င်ရေးတာ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရလဲ အင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့ ဒိုင်အာခီကြောင့်ရတာလား။ ဗိုလ်ချုပ်က ပြည်နယ်ပြည်မတောင်တန်းဒေသမကျန် အကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်ရေးတောင်းလို့ရတာလား။ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်စကား နားစွန်နားဖျားတော့ကြားဖူးပါတယ် ဘာတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ သစ္စာဖောက်တဲ့ ရန်သူနံပါတ် ၁ တွေချည်းပဲ ဆိုလား။။ သတိထားပေါ့ဗျာ ကိုယ်လျှောက်နေတာ သစ္စာဖောက်တို့လျှောက်ရာလမ်းလား။ သစ္စာရှိသူတို့ လျှောက်ရာလမ်းလားဆိုတာ။
ဘလောဂ်ဂါတို့ရဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ<<< အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အနှစ်၂၀လုံးလုံး ဒီလိုဖြစ်တဲ့ တရားခံတွေထဲမှာ ဒင်းတို့လဲ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်။ ---ပဲ
ကျုပ်ကွန်မင့်ကို သေချာသဘောပေါက်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ သစဿစာဖောက်တို့ သစဿစာရှိတို့ ဆိုတာထက် နပ်နောသူတွေပြင်ဆင်သင့်လေ့ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကို ပြင်ဆင်ထားခွင့်ရအောင် ပြောချင်းသာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဒိုင်အာခီကိုငြင်းစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အနောက်မှာ အလွန်အင်အားကောင်းတဲ့ ဖဆပလကြီးရှိတယ်။ အချို့ပဒေသရာဇ်အခွင့်အရေးကိုစွန့်လွှတ်ရမှာစိုးတဲ့ တိုင်းရင်းသား စှောဘွားနယ်စား အနည်းငယ်ကလွဲရင် တတိုင်းပြည်လုံးရှိတယ်။
အခုလဲ တတိုင်းပြည်လုံးဟာ အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ၁၀ဝ% ဒီမိုကရေစီကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုပေမယ့်.. ဗိုလ်ချုပ်အဂဿငလိပ်ကိုဆန့်ကျင်စဉ်ကလို အင်အားနဲ့ဗျူဟာကိုယ့်မှာရှိရင် ကျုပ်ပြောထားတဲ့ Plan A နဲ့တင်ကိစဿစပြီးပြီပေါ့ဗျာ ဘာပြောစရာလိုလဲ မဟုတ်ဘူးလား။ Plan A အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ရင်သာ တကယ်ကိုယ့်ဖက်ကနေ ၁၀၀% မဆုံးရှုံးရအောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ လူတိုင်း ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ရာစောသေးတယ်ဆိုတာကို သတိပေးတာဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီတွေက သူတို့ Manifest (မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်) တွေကိုချပြကြရတယ်။ အဲဒီ Manifest တွေကိုကြည့်ပြီးမှ ဆန့်ကျင်ရမယ့်သူနဲ့ အားပေးရမယ့်သူဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။